फेसबुकमा मात्र हैन, आमालाई मनमा पनि सजाउने कि?
गोबिन्द मरासिनी print
आज वैशाख कृष्ण पक्ष अर्थात् मातातिर्थ औंशी (आमाको मुख हेर्न दिन)। आफूलाई जन्म दिने र यो सृष्टि देखाउने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर व्यक्त गरी आशिर्वाद लिएर आज मुलुकभर मातातीर्थ औंसी मनाइने प्रचलन छ।
पुरानो धार्मिक किंवदन्ती अनुसार मातातिर्थ औंशीलाई फरक किसिमले ब्याख्या गरिएको छ। जसअनुसार एक दिन कुनै गोठाले गाई चराउन गएका बेला उसले आफूसित भएको रोटी पोखरीको किनारामा बसेर खान खोज्छ, उसले जतिपटक रोटी निकालेर खान खाजेपनि उसका सबै रोटीहरु तलाउमा झर्छन्।
यसरी उसको सबै रोटी सकिन्छ। अन्ततः उ पोखरीमा हाम फाल्ने निर्णय गर्छ र पोखरीमा हाम फालेर हेर्दा उसकी स्वर्गवासी आमाले सबै रोटी हातमा लिएको देखेर उ छक्क पर्दै आमालाई आफंैसित घर हिँड्न अनुनय बिनय गर्छ। तर आमा कुनै पनि हालतमा घर नजाने र उ पनि आमालाई नलिईकन घर नजाने अडानमा बस्छ।
यति भइसकेपछि आमा पनि हैरान भएर प्रत्येक वर्ष आजकै दिन आफू यही पोखरीमा आउने र दर्शन दिने बताएपछि गोठालो घर फर्कन्छ। तत्पश्चात गाँउका सबै व्यक्तिहरु प्रत्येक वर्ष त्यही दिन आफ्नी स्वर्गवासी आमाको दर्शन गर्न जान थालेपछि त्यही दिनलाई नै मातातीर्थ औंशी भन्ने गरिएको पाइन्छ।
यो त भयो हिन्दु धर्म र परम्परा अनुसारको पुरानो कुरो। हामीले एकपटक बिगतलाई बिर्सेर बर्तमानलाई हेरौैं। हामीले अहिले आमा औंशी कसरी मनाउने गरेका छौं? समयको परिवर्तनसँगै देश परिवर्तन हुन नसकेपनि हामी भने अच्चकाली नै परिवर्तन त भएनौं? एकपल्ट सोचौं त। पछिल्ला पुस्ताले आजका दिन सामाजिक सञ्जाल अझ भनौं फेसबुकका भित्तामा आमाको फोटो सजाएर मनाउँछौं।
यसो भन्दै गर्दा मेरो आमालाई मैले त्यसो गरेको छैन भन्दै नभनौं। यदि हामी र हाम्रो समाजले यसो नगरेको हुन्थ्यो भने हरदिन रत्नपार्कका पुलमा पैसा मागेर एक छाक खान बाध्य बनाउने पनि हामी नै हौं। बृद्ध अवस्थामा जसबेला हेरचहाको आवश्यकता पर्छ, त्यसबेला बृद्धाश्रम खचाखच हुने गरी आमाहरुलाई छाड्ने र घरमा ऐस आरामका साथ जिउने पनि हामी नै हौं। अस्पतालमा जाबो एक टुक्रा सिटामोल खाने रकम नपाएर छटपटाईरहेका बेला पाँच तारे होटलमा बसेर पार्टी गर्ने पनि हामी नै हौं। र, बाचुन्जेल आमालाई सक्दो अपहेलना गर्ने र निधन पश्चात दुःख देखाउँदै १३ दिन काजकिरीया गर्ने पनि हामी मध्यकै छोरा वा छोरी हौं। आमा औशींका दिन २ वटा मिठाइ दिएर मुख मिठाइदिने र अन्य दिन एक छाक खान दिन समेत कन्जुस्याँइ गर्नुभन्दा बरु सधै‌ं एक छाक दिएर, आमाको मुख हेर्ने दिन मिठाइ नदिएपनि फरक पर्दैन।
यसरी कडा शब्दमा आमाप्रति हामीले गरिरहेका ब्यबहारबारे चर्चा गर्दा हावादारी कुरो लाग्न सक्छ। तर एकपल्ट राम्रोसँग मनन गरेर सोचौं त के हामीले यसो गरेका छैनौं? काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरका गल्ली गल्लीमा हेरौं त दिनरात हजारौं आमालाई हात थाप्न बाध्य कसले बनायो? हामीले लत्याएका होइनौं भने यी आमाहरु आखिर कहाँबाट आए? कसले बाध्य बनायो? अस्पतालमा हेरचाह नगरी जिउँदै मर्न बाध्य कसले बनायो? बृद्धाश्रममा रुदैं बस्ने आमाहरु कहाँबाट आए? यो प्रश्नको जवाफ कुन छोराहरुसँग छ?
अझ कोही आजका दिन केही छोराछोरी आफूले बृद्धाआश्रममा लगरे छाडेकी आमालाई मिठो कुरा लिएर भेट्न जाने पनि परम्परा नै बनेको छ। आफ्नी आमालाई सहयोग र आश्रय चाहिएकोबेला जिम्मेवारी बहन नगर्ने र, फेसबुकमै फोटो राख्न भएपनि आमाप्रति माया देखाउने प्रवृत्ति कति जायज छ?
भनिन्छ, ‘आमालाई बिर्सेर ईश्वरलाई सम्झन सकिन्न’, नौ महिना आफ्नो कोखमा पालेर प्रसव पीडा भोगेर सन्तानलाई संसार देखाउँछिन् आमाले। आमाको दूधको भारा कहिल्यै उठाउन सकिन्न भन्ने उखान नेपाली समाजमा प्रचलनमै छ। तर हालको समाजमा हेर्ने हो यी सबै उखान र भनाइलाई खिल्ली उडाइरहेको छ।
मातृप्रेमको ऋण तिर्न नसकिएपनि आमाले गरेको मायाको स्मरणका लागि यो पर्व मनाइने गरेको संस्कृतिविद्हरुको भनाई छ।
मलाई लाग्छ, बाचुँन्जेल गरिएको व्यवहार, माया, प्रेम र स्नेहले नै आमालाई भरिपूर्ण हुन्छ। स्वर्गारोहण पश्चात गरिएका सबै क्रियाकलापहरु केबल आफ्नो परापूर्वदेखि चलिआएको चलन र परम्परा मात्र हो जसलाई नर्कान सकिन्न र नर्कानु पनि हुन्न।
औंशीका दिन खाली फेसबुकमा आमाको फोटो राखेर सहानुभूति दर्साउनुभन्दा आफ्नो मन–मुटुमा सजाउने गरौं। आमालाई आमाकै स्थानमा राखेर बाँच्न र जीवन कटाउन दिने हर प्रयास प्रयास गरौं।
आमा औंशीको सन्दर्भमा मेरी स्वर्गीय आमासहित सम्पूर्ण आमाहरु प्रति नमन।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १३, २०७४ ११:५३:५४